Akụkọ - Ihe omuma banyere ihe nchacha ihe nke igwe
Akwukwo Disc Myọcha
Mgbapu Waya Waya
Dị iche iche Nzacha
Ihe ọmụma banyere metal sintering nyo mmewere
1. enwere usoro ihe eji edozi maka ihe nhicha sintered? Enwere m ike ịzụta mmezi nhazi ọkọlọtọ?
Azịza: dị nwute, ihe nhicha sintered abụghị akụkụ ọkọlọtọ. Ọtụtụ mgbe, onye nrụpụtara na-emepụta ya dị ka usoro nke ụkpụrụ zuru ezu dịka nha, ọdịdị, ihe onwunwe na nzacha nha akọwapụtara nke onye ahịa.
2. Gịnị ihe nwere ike họrọ maka sintering nyo mmewere?
Azịza: ọla kọpa, ọla kọpa, igwe anaghị ata nchara, titanium na alloys dị iche iche. Ọ bụ ihe nkịtị na ọla na-eji na sintering nyo mmewere ụlọ ọrụ, na alloy metal bụ ala na-eri. Ihe kpatara ndị ahịa ji ahọrọ ụdị igwe ndị ọzọ ma ọ bụ alloys nwere ike ịbụ n'ihi gburugburu ọrụ dị iche iche, dị ka isi ike dị elu, nguzogide corrosion ka mma, ma ọ bụ ọnọdụ dị elu karị. Igwe anaghị agba nchara bụkwa ụdị ihe eji eme ihe karịa, n'ihi na ya na-eguzogide okpomọkụ na corrosion eguzogide dị nnọọ mma. Maka gburugburu mpaghara dị mgbagwoju anya, enwere ike ịchọ alloys nickel. N'ezie, ọnụahịa alloys ndị a dịtụ elu ma sie ike ịhazi, yabụ ọnụahịa ga-adị elu
3. Gịnị kwesịrị ntị ka ke imewe nke metal sintering nyo mmewere
Azịza: mgbe na-ahọpụta nyo mmewere, anyị kwesịrị ịtụle nyo ajụ, filtration uru, eruba ọnụego site nyo, ojiji gburugburu ebe obibi, wdg Dị iche iche ojiji chọrọ dị iche iche nzacha. Na imewe, ịkwesịrị ịtụle isi ihe ndị a:
1) Pore size: dịkwa na micron. Pore ​​size na-akọwa etu mgbasa ozi ị chọrọ ịza
2) Nrụgide nrụgide: na-ezo aka na mmiri mmiri ma ọ bụ ikuku gas site na nhụcha nza nza. Ikwesiri ikpebi uzo ojiji gi ma nye ya ndi nnocha ncha.
3) Okpomoku di elu: kedu ka elu igwe ọrụ na-arụ ọrụ nke ihe nzacha na arụmọrụ ya? Ngwunye ígwè ị họọrọ maka ihe ntanetị ga-enwe ike iguzogide okpomọkụ nke gburugburu ọrụ.
4) Ike: sintered nyo ọcha bụ nhọrọ kasị mma maka ike dị elu. Uru ọzọ bụ na ha nwere otu ike ahụ na-aga n'ihu ma ọ bụ na-agagharị agagharị.
4. Kedu ozi m kwesiri inye nye onye nrụpụta iji nye iwu?
1) Ngwa: gụnyere iji gburugburu ebe obibi, nzacha nzacha, wdg
2) nzacha nzacha
3) Ihe ekwesiri ị attentiona ntị na ya, dị ka acid na alkali resistance
4) Enwere ọnọdụ ọrụ pụrụ iche, dị ka ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide
5) Kedu ihe na-emetọ ihe
6) Akụkụ, ọdịdị na ndidi
7) Otutu achọrọ
8) Otu esi etinye
Igwe anaghị agba nchara Myọcha, Automotive Myọcha, Ọrụ gas gasị, Ihe nzacha mmiri, Air Nzacha, Igwe anaghị agba nchara ikuku filtration,